Semalt: Grepsr - Nhazi Mgbatị nke Chrome
Grepsr bụ ihe dị ịtụnanya dị mfe weebụ, nke ndị ọrụ nwere ike ịchịkọta ma hazie iche iche data si net. Ọ na-elekwasị anya na ndị ọrụ na-abụghị ndị ọrụ nchịkwa bụ ndị dị njikere ịkwụ ụgwọ maka iji nweta data ha gbakọtara ma hazie n'ụzọ dị mma. Nke a ngwa ntinye weebụ na-enye ndị ọrụ ya uru ndị a:
Chekwa Oge na Ike
Ndị ọrụ nwere ike wepụ ọtụtụ data sitere na ibe weebụ dị iche iche n'enweghị iji mgbagwoju anya ngwaọrụ ngwanrọ. Ha ghaghị ịhazi oge kalenda ha na-eme mgbe niile maka ịmecha ihe. Ọ bụ ihe ngwanrọ nchịkọta dị mfe nke nwere interface enyi-enyi na-aghọta maka ndị ọrụ nhazi. Taa, ọtụtụ ndị ahịa na-eji usoro a iji mee ka ụlọ ọrụ ha rụpụta nnukwu ihe. Grepsr na-ekwe nkwa inye ha data ziri ezi mgbe ọ bụla ha chọrọ.
Na-eji Ngwá Ọrụ Nrụpụta Ọrụ na Ọrụ Akaghị Aka
Grepsr na-eji ụfọdụ ngwaọrụ dị ịtụnanya, yana nkwado dị ukwuu na mwekota. N'ihi ya, ọ na-enye usoro dị mfe maka ndị ọrụ ya, ndị chọrọ iji ngwaọrụ pụrụ iche wepụ ihe ọ bụla site na net. Dịka ọmụmaatụ, usoro ngwanrọ a metụtara data B2B, dịka ọnụahịa nke ngwaahịa, ndepụta nke ebuka, aha, yana kọntaktị azụmahịa.
Nye ndị ọrụ na Otu Ọrụ Nkwado Na-atụghị Anya
Ọ bụghị ọrụ dị mfe maka ndị nyocha weebụ iji wepụ data niile ha chọrọ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ha na-agbalị ịchọta ọnụahịa nke ụfọdụ ebuka site na ibe weebụ na ebe nrụọrụ weebụ na-agbanwe usoro ya, nhazi ha na-achọ nyochagharị. Nke a bụ ọrụ nke ndị ọkachamara Grespr nwere ike ime enweghị ego ọzọ.
Onye na-eji Ngwudata Ngwudata Nyocha
E nwere ụlọ ọrụ dị iche iche dị n'ahịa nke chọrọ ịchọta na hazie data weebụ ha, dịka nnukwu ụlọ ọrụ na ụlọ ahịa. Ha abụọ choro ka ndị na-eme ihe ike na-aga n'ihu na ndị ọkachamara nke Grepsr nwere ike inyere ha aka. Ọzọkwa, ndị obere ụlọ ọrụ nwekwara ike ịchọ enyemaka ahụ iji wepụta data na weebụ na-akpaghị aka.
Mepụta mmemme ya na Grepsr
Mgbe ndị ọrụ mepụtara otu ọrụ, ngwanrọ software a na-enyocha ha ma nyeghachi ndị ọrụ ọnụahịa pụrụ iche (ọnụ ahịa). Ozugbo e guzobere ọnụahịa, a na-ekepụta ihe data, usoro nchịkọta data wee malite. Ndị ọkachamara Grepsr kwadoro ndị na-ahụ maka weebụ site na nkwupụta ngwa ma ọ bụ ozi ịntanetị.
Ngwá ọrụ nchịkọta ngwanrọ a na-eji nzere ọkwa, ya mere ndị ọrụ nwere ike ijide n'aka na ozi ha niile dị mma. Ọzọkwa, ha kwesịrị ịma na oge ọ bụla ha chọrọ, ha nwere ike inwe njikwa zuru oke nke data ha Source .